Vondrom-piarahamonin'ny fampiharana amin'ny Tetezamita • Fahalalana FAHOMBIAZANA
Vondrom-piarahamonin'ny fampiharana amin'ny Tetezamita
Mitodika any aoriana, mitodika any aoriana, ary raiso ny fahafahanao hamolavola ny ho avy
Kirsten Krueger Aprily 15, 2021
“Tetikasa, toerana, ary miova ny fikambanana fa ny fanoloran-tena eran-tany amin'ny fampitomboana ny fianarana dia mijanona ho matanjaka. " – Rita Badiani, Talen'ny tetikasa, Porofon'ny asa
Tao anatin'ny valo taona teo amin'ny fitondrana ny Fomba fiasa mirindra amin'ny fampitomboana ny vondrom-piarahamonina fanao (POLISY), ny Porofon'ny asa (E2A) Ny tetikasa dia nampitombo ny fiarahamonina avy amin'ny mpiara-miombon'antoka maro 2012 saika 1,200 mpikambana maneran-tany ankehitriny. Miaraka amin'ny fandraisana anjara maharitra avy amin'i U.S. Sampan-draharaha misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) ary mpiara-miombon'antoka ara-teknika fototra (anisan'izany ireo mpikambana mpanorina ExpandNet ary ny IBP Network), ny COP dia nandroso ny sehatry ny fampitomboana. Nandritra ny taona maro dia namoaka COP andiany webinar sy atrikasa maro ary namolavola tatitra sy vokatra hafa, anisan'izany ny an bibliographie nohavaozina momba ny fomba fiasa sistematika ho an'ny scaling up.
Miaraka amin'ny Tetikasa E2A mifarana amin'ny volana martsa 2021, Ny biraon'ny USAID misahana ny mponina sy ny fahasalaman'ny fananahana dia nanohana ny famindrana mahomby ny andraikitry ny sekretera COP amin'ny tetikasa Research for Scalable Solutions. (R4S) eo ambanin'ny FHI 360. Ity famindrana ity dia miantoka fa haharitra ity sehatra ity, manohana ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozam-pahalalana amin'ny dingan'ny fampitomboana ireo fomba fanao mifototra amin'ny porofo ho an'ny fandrindram-pianakaviana. FHI 360 manana tantara lava momba ny fitarihana amin'ny fandrindrana ny fianakaviana, siansa fampiharana, ary manitatra ny fanavaozana ho fenitra fanao, ka io COP io dia fitia voajanahary.
Trinite Zan, Fampiasana fikarohana ho an'ny R4S, dia hita taratra tamin'ny iraka mitambatra R4S sy ny COP:
“Ho tetik'asa siansa fampiharana, R4S dia sady hamoaka porofo no hiantoka ny fampiharana azy. Ny andraikitry ny fikarohana sy ny fampiasana ny fikarohana 'kambana' dia mifantoka tsara amin'ny andraikitry ny fampitomboana sy ny elanelana porofo mifandraika amin'ny haavony.. Ny tanjona ankapobeny ho an'ny R4S sy ny COP mivelatra dia mifanaraka tsara. Ny consortia R4S dia tena miandrandra ny hiara-hiasa amin'ny rehetra ao amin'ny COP hanampy amin'ny fanitarana ny kalitao avo lenta, MAMPIDI-DOZA, ary serivisy FP mitombina amin'ny ambany- ary ireo firenena manana fidiram-bola antonony.”
Fandinihana amin'ny sehatry ny fampitomboana
Ny volana septambra ny COP 2020 fihaonana, Ny farany ambany fitarihan'ny E2A, Nandray anjara tamin'ireo mpandinika sy mpamorona sangany amin'ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina mba hisaintsaina ny sehatra sy ny fiezahana amin'ny fampitomboana.. ny firaketana ny fivoriana manome hevitra am-polony ho an'ny hoavin'ny fampitomboana.
Pikantsary avy amin'ny COP's Septambra 2020 fihaonana
Anisan’izany ny zava-nisongadina tamin’ilay fivoriana:
Tantara fohy momba ny tontolon'ny haavon'ny fampandrosoana nataon'i Larry Cooley an'ny MSI, OMS, miaraka amin'i Johannes Linn ao amin'ny Brookings Institution, miara-mitantana ny sehatra iraisam-pirenena Fiaraha-monina maneran-tany momba ny fanazaran-tena amin'ny vokatra fampandrosoana, izay manohy ny fitarihana ny Vondrona miasa ara-teknika ara-pahasalamana ny ExpandNet.
Resadresaka momba ny fiovan'ny fifantohana - avy amin'ny tsy fivadihana mankany amin'ny fitsabahana mankany amin'ny fahatokiana mankany amin'ny vokatra - izay nitarika adihevitra midadasika momba ny fitantanana adaptatera ho singa manan-danja amin'ny fampitomboana..
Fanamafisana ny maha zava-dehibe ny fandraketana mandritra ny dingan'ny fampitomboana, mampiasa fitaovana toy ny ExpandNet's Fampiharana Mapping Tool.
Nitombo ny fahalianan'ny mpamatsy vola sy ny mpitsabo amin'ny fampitomboana ny fandaharana hanovana ny fenitra ara-tsosialy.
Antso ho an'ny fiaraha-miasa ifotony izay mampifantoka ny governemanta ho mpiara-mamorona hatrany am-boalohany.
Famelabelarana avy amin'ny Global Financing Facility izay nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny porofo hanampiana ny governemanta hamaritra izay tokony hatao sy tsy tokony hatao., ary ny fomba hampitomboana ny fahazoana vaovao hanohanana ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny fandaniana.
Ampio hamolavola ny hoavin'ny fisondrotana
Santionany amin'ireo lohahevitra tsy tambo isaina azon'ny COP tohizana ireo. R4S dia manolo-tena amin'ny fifanakalozan-dresaka, ary manasa anao hanampy amin'ny famolavolana ny hoavin'ny COP—manomboka amin'ireo hetsika ireo:
Raiso ity fanadihadiana telo minitra ity mba hanehoana ny hevitrao momba ny lohahevitra ho an'ny dinika sy hetsika ho avy, matetika ny fivoriana, sy ny maro hafa.
Miaraha amin'ny Fomba fiasa mirindra amin'ny fampitomboana ny fomba fanao tsara indrindra FP/RH COP amin'ny IBP Xchange, misoratra anarana amin'ny listserv, SY asao ny mpiara-miasa aminao hiaraka aminay. Ny tranomboky manankarena an'ny COP dia afindra avy amin'ny E2A mankany amin'ny tranokalan'ny IBP Xchange. Ity no toerana iasan'ny COP ho an'ny vondrom-piarahamonina hizarana loharano, hevitra, ary fifandraisana.
Ny COP conveners dia manantena ny hanohy ny fiaraha-miasa mba hiantohana ny fifantohana amin'ny fampitomboana ny politika sy ny programa fandrindrana ny fianakaviana mahomby.. Ny valan'aretina COVID-19 dia nampitombo ny fifaninanana ho an'ny saina sy ny famatsiam-bola amin'ny sehatra fampandrosoana, fa ny fandrindram-pianakaviana dia mijanona ho paika "tsara indrindra ho an'ny volanao".. Miaraka amin'ny fahalalana sy ny fanoloran-tena maharitra ao anatin'ity vondrom-piarahamonina ity, andao hanohy haneho sy hisolo vava ny fiantraikan'ny tombotsoa azo avy amin'ny fandrindram-pianakaviana amin'ny tanjona hafa maneran-tany hanatsarana ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny rehetra..
Mpanolotsaina ara-teknika momba ny fampiasana fikarohana, FHI 360
Kirsten Krueger dia Mpanolotsaina ara-teknika momba ny fikarohana momba ny fahasalamana manerantany, Vondron'ny mponina sy ny sakafo ao amin'ny FHI 360. Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy fitarihana hetsika fampiasana porofo maneran-tany sy any amin'ny faritr'i Afrika izy mba hanafainganana ny fampiasana fomba fanao mifototra amin'ny porofo amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpamatsy vola., ny mpikaroka, mpanao politika ara-pahasalamana, ary ny mpitantana ny programa. Ny sehatry ny fahaizany dia ahitana ny fandrindrana ny fianakaviana/fahasalamana ara-pananahana, fidiran'ny fiarahamonina amin'ny fanabeazana aizana tsindrona, fanovana politika sy fisoloana vava, ary fananganana fahaiza-manao.
Recap: “Fampidirana ny fanoloran-tena FP2030”
Global Health Science and Practice Technical Exchange: Avia ho namanay!